Mayelana Nathi - Shaoxing Liuyi Textile Import&Export Co., Ltd.
I-Shaoxing Liuyi Textile CO., LTDiyinkampani echwepheshile yokungenisa nokuthekelisa kwezindwangu egxile ocwaningweni nasekuthuthukisweni, ukuklama, nokudayiswa kwezinhlobonhlobo zezindwangu.Sitholakala edolobheni laseChina lendwangu esifundazweni saseZhejiang, okuyisikhungo esikhulu kunazo zonke sokusabalalisa izindwangu e-Asia.Eduze kwechweba lase-Ningbo kanye nechweba lase-Shanghai, sinokuhamba olwandle okulula kakhulu okuvumela ukuthunyelwa ngesikhathi.Ithimba lethu labahwebi bangaphandle linabantu abangaphezu kuka-20, abaklami bendwangu abaqashwe ngokukhethekile, izisebenzi zokubona izindwangu, ukusebenza kwewebhusayithi, njll., inqwaba yamathalente.
FuzhouI-Liufang ukunithaCo., Ltd.iyimboni yokukhiqiza yenkampani yethu, imishini ethuthukisiwe kanye nethimba lezobuchwepheshe, ukuze sikwazi ukuqinisekisa kangcono ikhwalithi yemikhiqizo.
Mayelana nocwaningo nokuthuthukiswa komkhiqizo, besilokhu sibambelela kumbono ochwepheshe, ozimisele.Sithembisa ukukunikeza isevisi yamakhasimende enhle kanye nekhwalithi yomkhiqizo ethembekile.
Imikhiqizo yethu eyinhloko izindwangu ze-tulle, indwangu ye-mesh, indwangu yeleyisi, i-lace trim, indwangu eboshwe, indwangu ye-spandex, indwangu yokubhukuda kanye nokuphrinta / ukufekethisa / ukukhukhula / ukukhonkotha / ama-sequins / i-glitter / i-foil stamping process fabrics, esetshenziswa kabanzi ekugqokeni kwezingane, izingubo zabesifazane, izingubo zangaphansi zabesifazane, izingubo zomshado, ezemidlalo, izingubo zokubhukuda, umhlobiso, njll. , senza imikhiqizo yekhwalithi ephezulu futhi sigxile emakethe ephakathi nendawo ephezulu.
Sinezinzuzo ezilandelayo ezinhlanu eziyinhloko:
1.Asigcini nje ngokuba neqembu le-R&D, kodwa futhi singabakhiqizi.I-OEM ne-ODM yamukelekile.
2.Sinelabhorethri yokuhlola indwangu ukuze ihlangabezane nezidingo zekhwalithi ephezulu yamakhasimende.
3.Sithatha amakhasimende njengesikhungo, insizakalo njengenhloso, ikhwalithi njengesiqiniseko.Abaklami bendwangu benkampani bangakwazi ukwenza ngokwezifiso zakho, futhi basayine isivumelwano sobumfihlo.
I-4.Asigcini nje ukukhiqiza izindwangu, kodwa singenza okuningi ngemuva kokucubungula ezindwangu, ezifana ne-embroidery, ukuphrinta, ukuncenga, ukugoqa, ama-sequin nokunye.
I-5.Umnyango wethu wokuhlola ikhwalithi ngeke uqondise kuphela yonke inqubo yokukhiqiza, kodwa futhi wenze ukuhlolwa kokugcina kwekhwalithi ngaphambi kokuthunyelwa, futhi ungakunikeza umbiko wekhwalithi ohambisanayo.